» म्याउँ–म्याउँ किन गर्छ बिरालाे ?
१ असार २०७६, आईतवार ०५:५३
बिरालो किन म्याउँ गर्छ ? प्रश्न सामान्य छ, तर जवाफ सामान्य छैन । जब बिरालोलाई हामी मायाले चलाउँछौँ तब ऊ म्याउँ गरेर आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ । तर, बिरालोले म्याउँ गर्नुको रहस्य यति मात्रै होइन । पहिले मानिसलाई लाग्थ्यो कि बिरालोको मुटुको दाहिने भागमा अक्सिजनमिश्रित रगत पुर्याउने शिरासँग यसको कनेक्सन छ । तर, पछि अनुसन्धान गर्दा के पत्ता लाग्यो भने उक्त आवाज बिरालोको घाँटीबाट निस्किने गर्छ । बिरालोले सास लिँदा र फ्याँक्दा आवाज निकाल्छ ।
विज्ञानले पत्ता लगाएअनुसार कण्ठबाट हावा चल्दा बिरालोको मुखबाट यस्तो आवाज निस्किन्छ । तर, यो आवाज बिरालोले किन निकाल्छ ? वैज्ञानिक भन्छन्, यसको सीधा सम्बन्ध बिरालोको दिमागको एक भागसँग सम्बन्धित छ । जसलाई न्युरोल अक्सिलेटर भनिन्छ । बिरालोलाई चलाउँदा न्युरोल अक्सिलेटरले महसुस गर्न सक्छ । तर, यो कहिलेकाँही मात्रै हुने गर्छ ।
जब हामी बिरालोको खास ठाउँमा चलाइदिन्छौँ तब उसले म्याउँ गरेको सुन्छौँ । तर, कतिपय अवस्थामा मानिस वरिपरि नदेख्दा पनि बिरालो म्याउँ गर्छ । ब्रिटेनकी मरजान डेरेवेयर बिरालोकी फोटोग्राफर हुन् । उनले चारवटा बिरालो पनि पालेकी छिन् । केही समययता मरजान बिरालोको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयास गरिरहेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘बिरालोपिच्छे म्याउँ गर्ने तरिका पनि केही फरक हुन्छ । कतिपय बिरालो बिल्कुल कराउँदैनन् भने कतिपय बिरालो ज्यादा कराउने हुन्छन् ।’ मरजानले पालेका चार बिरालामध्ये एउटा आवारा बिरालो निकै कम म्याउँ गर्ने थियो भने पाल्तु बिरालो तुलनात्मक रूपमा ज्यादा नै म्याउँ गथ्र्यो । मरजानले तीन हजारभन्दा धेरै बिरालोको तस्बिर खिचेकी छिन् । तीमध्ये कतिपय बिराला जति कोसिस गरे पनि म्याउँ नगरेको उनले बताएकी छिन् । तर, कहिलेकाहीँ बिरालोले सुतेको अवस्थामा पनि म्याउँ आवाज निकाल्छ । यो कुराबाट थाहा हुन्छ कि बिरालो खुसी भएको अवस्थामा मात्रै म्याउँ गर्दैन । कुकुरको तुलनामा बिरालोको आनीबानी र स्वाभावमा निकै कम अनुसन्धान भएको छ ।
अमेरिकाका बिरालोविज्ञ ग्यारी वित्जम्यान भन्छन् म्याउँ गरेर बिरालो आफ्नो खुसी प्रस्तुत पनि गर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा उसले नर्भस हुँदा र तनाव या डर लागेको वेलामा पनि म्याउँ आवाज निकाल्छ । तर, खासगरी बिरालोले खुसी हुँदा नै म्याउँको आवाज निकाल्छ । पहिले–पहिले म्याउँको आवाजमा बिरालो आफ्नो कुरा भन्छ भन्ने विश्वास थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको सुुरुवातमा उसको म्याउँको पछाडि खुसी मात्र छैन, अरू पनि कारण छ भन्ने गरिन्थ्यो । बित्जम्यानका अनुसार म्याउँ गरेर बिरालोले अन्य भावना पनि प्रस्तुत गर्छ । बिरालोको बच्चाले जन्मिएको केही दिनमै म्याउँको आवाज निकाल्न सुुरु गर्छ । बच्चाको आवाजको सहयोगले माउ बिरालोले बच्चा खोजेर दूध चुसाउँछ । कुनै बिरालोमा यो बानी पछिसम्म पनि रहिरहने हुन्छ । म्याउँको आवाज निकालेर बिरालोले मानिसलाई आफू भोको हुनुको संकेत पनि दिने गर्छ । कुनै बिरालो नयाँ समूहको भेटमा, डराएको वा तनावमा रहेको अवस्थामा पनि म्याउँको आवाज निकाल्छ । जस्तै, कुकुर उसको पछाडि लागेको छ भने उसले म्याउँको आवाज निकाल्छ ।
जनावरका विषयमा जानकार ब्रिटेनका स्याम वाट्सन भन्छन्, ‘जंगली बिरालोले किन म्याउँको आवाज निकाल्छ यो कुरा हाम्रो खोजभन्दा बाहिर छ । तिनीहरू एक–अर्कासँग खेल्दा वा जिस्किँदा पनि म्याउँको आवाज निकाल्छन् ।’ म्याउँको आवाज निकालेर बिरालोले आफ्नो थकान मेटाउने कतिपय अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । त्यसबाट उसको दिमाग मालिस हुन्छ र २५ देखि १०० हर्जको आवाजबाट हड्डी मालिस भएको महसुस गर्छ । यही कारण निदाएको समयमा पनि बिरालो घुरेको सुनिन्छ । जानकार भन्छन्, यस्तो आवाज निकालेर बिरालो आफ्नो थकान मेटाउँछ ।
जानकार भन्छन्, तनाव कम गर्न बिरालो पाल्नु निकै राम्रो उपाय हो । यसबाट मुटुरोगको खतरा एकतिहाई कम हुन्छ । त्यसैले बिरालोको म्याउँ मानिसको आफ्नो स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । वित्जम्यनका अनुसार म्याउँको आवाजबाट मानिसलाई पनि खुुसी महसुस हुन्छ । हामीले देखेका छौँ, पाल्तु बिरालो यताउता गर्दै आवाज निकालेर आफ्नो मालिकको खुट्टावरिपरि घुम्छ । जस्तो कि उसले केही खानेकुरा मागिरहेको छ । यो महसुस हाम्रो लागि सुखद हुन्छ । बिरालोको म्याउँ होस् या घुरेको आवाज, हामी त्यसलाई जति आनन्ददायी मान्छौँ त्यो हाम्रा लागि त्यति नै राम्रो कुरा हो । यसबाट बिरालो र मानिसबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ रहेको प्रस्ट हुन्छ ।